Sida loobarto CCNA-da cusub loona galo imtixaanka - Hurbad
Sida loobarto CCNA-da cusub loona galo imtixaanka
Abdirizak Hersi	September 16, 2020
Maqaalkaan waxaan ku kala dhigdhigeeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad barato si aad ugu guuleeysato imtixaanka CCNA 200-301.
CCNA 200-301 waa Cisco shahaadooyinka eey bixiso mida koowadd, oona laf dhabar u ah cisco shahaadooyinka eey bixiso oo dhan. CCNA-du waa shahaado looga baahanyahay qofkasta oo Network Administrator ama Engineer ah in oow heeyisto, waxaana la ogaaday CCNA-du in eey tahay shahaadada dadka badankoodu eey shaqada ku helaan.
Wixii ka horeeyay February 24, 2020, waxaa jirinjiray CCNA yo badan oona kala ahaa:
balse Cisco CCNA yada eey bixin jireen oodhan waxa eey ku soo koobeen sadex oo kaliya, sadex daas oo kala ah
mida ugu caansan eey dadka dhani bartaan waa CCNA Enterprise 200-301, oona lagu barto Networking Fundamentals oo dhan, koorsadaan ayaa intaxaan wadata looga baahan yahay in oow ku guuleeyisto qokii raba in oow helo CCNA (Cisco Certified Network Associate) Certification.
CCNA 200-301 Imtixaankeeda
CCNA-da Imtixaankeedu maahan mid sahal ah oo aad buu u adagyahay, waxaa looga baahanyahay qofka raba in oow galo CCNA Exam, isdiyaaris badan, oona noqdo fulay ula badan sida oow ugu guuleeyisto itixaankaas.
Waxaa lagu weeydiinayaa ilaa iyo 100 Su’aalood, oona lagaa rabo in aad uga jawaabto mudo 120 Daqiiqadood ah.
ilaa iyo lix topic ayaa imtixaanku ka imaanayaa, kuwaasoo kala ah:
Waxaad ka heli kartaa liis dhammaystiran website ka Cisco.com
Halkeen ka barankaraa CCNA?
waa sua’aal muhiim ah ood isweeydiin kartid, hadii aan kaaga jawaabo su’aashaas, CCNA 200-301 waxa eey kuugu diyaartahay, hooyga tababarka engineerada mustaqbal ka hurbad.com.
koorsadaan CCNA 200-301 waxa eey ku baxeeysaa luuqada afsomaliga, oona waxaa loo sharaxayaa qofkastaa oo koorsadaan baranaya oow fahmin karo. Waxaana koorsadaan dhigaya ruugcadaa ku soo dhexjiray tiknolojiyada 17 sano.
Labs maleedahay koorsadaa?.
koorsadaan waxa eey iskugu jirtaa Theory iyo labs, lagu dhisay Eve-ng.
Qiimaha Koorsadaan iyo Imtixaankeeda ?
Hurbad CCNA Course $20
koorsadaan CCNA du maahan koorso sahlan balse hadii aad barato hormar weeyn ayaan ka gaaree dhanka shaqada IT -ga
Hurbad CCNA 200-301 Course link